Bedelka Xiriirada ka iPhone in Moto X In 1 Click
> Resource > iPhone > Transfer Xiriirada ka iPhone in Moto X 1 Click
Just tanaasulo jir ah iPhone iyo boodi markabka si Motorola Moto X? Ma sugi karo si ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Moto X? Waa hagaag, ma ahan insanely adag tahay in la sameeyo kala iibsiga xiriiro. Haddii aad adeeg costumed ka Verizon, T-Mobile, att & T iyo qaran, waxaad aadi kartaa dukaamada ay xiriiro kala iibsiga.
Si kastaba ha ahaatee, ma aha in aad si ay u tagaan waddo dheer si ay u gudbiyaan xiriirada iPhone in Moto X. Halkii, kaliya aad u joogi kartaa guriga oo xamili fudayd. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in ay leeyihiin xirfad qalab kala iibsiga phone - Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Qalabkani waxa uu awood aad si ay u gudbiyaan dhammaan xiriirada aad jir iPhone in Moto X mid ka mid click.
Download MobileTrans in aad nuqulka xiriir ka iPhone in Moto X.
Fiiro gaar ah: Iyada oo MobileTrans, waxaad ka iPhone 6s wareejin karaan xiriirada (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5, 5c iPhone, iPhone 5s, iPhone 4s, iPhone 3GS iyo iPhone 4 macruufka socda 5, macruufka 6, macruufka 7, macruufka 8 iyo 9 macruufka in Moto X.
Tallaabada 1. Daahfurka qalab kala iibsiga phone kombiyuutarka
Si aan ku bilaabo, rakibi iyo abuurtaan MobileTrans kombiyuutarka. Markaas, furmo suuqa hoose u muuqataa. Dooro Phone in hab Transfer Phone oo guji Start .
Tallaabada 2. Isku aad iPhone iyo Moto X in kombiyuutarka
Markaas, labada xirmaan hore iPhone iyo Moto X in kombiyuutarka deeruhu galay fiilooyinka USB. Software ayaa si toos ah kuu akhriyi doonaa xogta o aad iPhone iyo Moto X ka dibna soo bandhigaan on furmo suuqa hoose. Your iPhone muujinaysaa ilaa bidixda, iyo Moto X on xaq.
Haddii aad rabto in aad u faaruqiso buugga telefoonnada aad Moto X si loo badbaadiyo kuwa ka iPhone, aad sax karaa xogta oo cad ka hor inta nuqul .
Fiiro gaar ah: Si aad u dhaqaaqo xiriirada, jadwalka, music, videos, SMS iyo sawiro ka Moto X si iPhone, kaliya aad u baahan tahay in aad ku dhufo "Flip" oo ay raacaan tallaabada xigta.
Tallaabada 3. xiriirada iPhone in Moto X
By default, xiriirada, jadwalka taariikhda, fariimaha qoraalka ah, music, videos iyo sawiro waxaa loo ogol yahay in lagu wareejiyo aad Moto X. In la wareejiyo xiriiro oo keliya, waa in aad ka saarto marks ka hor waxyaabo kale.
Markaas, waxaa la gaaray waqtigii ay u nuqul ka iPhone xiriirada si X. Moto Riix Start Copy oo sug ilbiriqsi. Markaas, xiriir la info oo ay ku jiraan horyaalka shaqo, cinwaanka email, magaca shirkadda la koobiyeyn doonaa Moto X.
Waxaad arki, taasi tutorial ka fudud oo ku saabsan sida ay u gudbiyaan xiriirada ka iPhone in Moto X. haboon oo lagu badbaadiyo wakhtiga, miyaanay ahayn? Hadda, qof walba siin call a sida aad jeceshahay!
Fiiro gaar ah: Ka dib markii xiriirada kala iibsiga, waxaad isticmaali kartaa Wondershare MobileGo for Android , tababaraha sahlan in la isticmaalo Android, si ay u maareeyaan wax kasta oo aad Moto X kombiyuutar.